စိုင်းစိုင်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: June 2007
The right to access to infrastructure irrespective of where you live
The right to the skills, knowledge and skills enable people to use and shape the internet to meet their needs
The right to free and open source software
The right to equal access for men and women.
The right to access and create content that is culturally and linguistically diverse
The right to engage in online protest
The right to access publicly funded information.
The right to use encryption
The right to multilateral democratic oversight of the internet
The right to transparency and accessibility of the internet legislative body
The right toadecentralized, collaborative and interoperable internet
The right to rights protection, awareness and education
The right to recourse when rights are violated.
The right to interfaces, content and applications accessible to all (“inclusive design”)
More detail and full text :-) here we go http://rights.apc.org/charter.shtml
Posted by Sai Sai at 8:31 PM0comments
၁. ယဉ်ကျေးလိမ္မာ များထက်သာတဲ့ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာပါ။
၂. မျိုးကောင်းသားများ မွေးဖွားရာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၃. ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားတတ်တာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၄. ကူညီဖို့ရာ လက်မနှောင့်မနှေးတာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၅. အညိှးအတေးမကြီးတတ်တာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၆. အမှတ်မရိှ သနားတတ်တာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၇. အမြဲလိုလို အားနာတတ်တာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၈. ဘာတြွေဖစ်ဖြစ် ပြုံးနေတတ်တာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၉. ရှေ့နောက်မတူ အလည်ထိုင်လွဲ ဇွဲမလျှော့တာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၁၀. အမှားအမှန်မဝေဖန် ခေါင်းငုံ့ခံတာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၁၁. နဲနဲလုပ်ငြား များများကြွား မှတ်သား အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၁၂. ငါနဲ့မူမတူ ငါ့ရန်သူ မှတ်ယူ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၁၃. သူများကောင်းစား မနာလိုပွား အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၁၄. သူများအပေါ်ကောင်း အချင်းချင်းထောင်း အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၁၅. မဆင်ချင်ပါ အထင်ကြီးတာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ
၁၆. ဘယ်လိုနှိပ်စက် မနာတတ်တာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၁၇. ရှိရှိ၊မရှိရှိ ကြွားဝါတတ်တာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၁၈. သာပေါင်းညာစား ပြောဆိုတတ်တာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၁၉. ဟိုဒီအကြောင်းပြ အပျင်းကြီးတာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၂၀. ရာထူးဂုဏ်သိန် အလွန်မက်တာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၂၁. ရိုးသားသူများလူ့ငနွား ခေါ်ခံရတာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၂၂. လေယာဉ်ပိုင်ရှင်ပေါ်လို့လာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၂၃. Credit Card မသုံးပါ လက်ငင်းရှင်းတာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၂၄. Hand phone ၁လုံး သန်းချီတန်တာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၂၅. ပုခုံးပွင့်ရှိမှအလုပ်ဖြစ်တာ အဲ့ဒါတို့မြန်မာ။
၂၆. တံခါးဖွင့်စီးပွား ရေလောင်းရတာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၂၇. ကပ်ပွားသမားများချမ်းသာတာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၂၈. ကားအဟောင်းတွေ စျေးကောင်းရတာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၂၉. တိုရိုတာ မှ ရွှေသာယာ ဖြစ်တာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၃၀. ၀ပ်သောက်ကားများ ၀န်ကြီးကားဖြစ်လာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၃၁. လိပ်တက်ကားစီး ၀န်ကြီးမြေး အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၃၂. လူကြီးအမျိုးများ ကောင်းကောင်းဝါး အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၃၃. စီးပွားဖြစ်ရာ လိုက်လုပ်တတ်တာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၃၄. ပိုက်ဆံစျေးကျ သုံးမရ အပြုံးမပျက်တာ ဒို့မြန်မာ။
၃၅. စီးပွားပိတ်ဆို့ အမေရိကန်တို့ ဂရုမစိုက်တာ ဒို့မြန်မာ။
၃၆. ရက်ကွက်တစ်ခု Pub သုံးခု ဖွင့်လို့ဖြစ်တာ ဒို့မြန်မာ။
၃၇. တောင်သူလယ်သမား ဘိန်းစိုက်စား စီးပွားတက်တာ ဒို့ဗမာ။
၃၈. လူချမ်းသာသားများ အလုပ်ရှား စီးရီးထုတ်တာ ဒို့ဗမာ။
၃၉. မြန်မာပြည်သားများ မလေးရှားသွား အလုပ်သမားဖြစ်လာ ဒို့ဗမာ။
၄၀. ပညာတတ်များ ဒေါင့်ပို့ထား အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၄၁. ဖတ်တတ်ယုံလေး သင်ကာပေး ဆိုးရွားနေတာ ဒို့မြန်မာ။
၄၂. ဘွဲ့ရသော်ငြား အလုပ်ရှား မှတ်ထား ဒို့မြန်မာ။
၄၃. ၁၀တန်းအောင်များ နိုင်ငံခြားသွား တက္ကသိုလ်မတတ်တာ ဒို့မြန်မာ။
၄၄. တက္ကသိုလ်သား မှန်ခဲ့ငြား ဖဲရိုက်တတ်တာ ဒို့မြန်မာ။
၄၅. တစ်နှစ်ဆယ်ရက် အဝေးသင်တက် အောင်ချက်ကောင်းတာ ဒို့မြန်မာ။
၄၆. သမိုင်းကြောင်းများ ပုံပြင်လား မှတ်သား ဒို့မြန်မာ။
၄၇. တစ်နေ့နှစ်ခါ နှစ်လုံးရောဂါ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၄၈. ဆေးဝါးမရှိပါ နယ်ဆေးရုံမှာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၄၉. အေကိုက်သူများပေါများလာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။ အားကစားဦးတည်ချက်
၅၀. ဘောလုံးကန်ပွဲ သောက်ရှက်ကွဲလည်း စိတ်မနာနိုင်တာ ဒို့မြန်မာ။
၅၁. ဘောလုံးပွဲမှာအမြဲသာ သောက်တလွဲဖြစ်တာ ဒို့မြန်မာ။
၅၂. ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားရာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၅၃. ကျောင်းကန်ဘုရား ပေါလှတာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၅၄. အလှူဒါန ရက်ရောတာ အ့ဲဒါဒို့မြန်မာ။
၅၅. နေရာတိုင်းလို လှူစေလို ကောက်ခံတတ်တာ ဒို့မြန်မာ။
၅၆. ကိစ္စပြီးအောင် အရက်လက်ဆောင် ကန်တော့ရတာ ဒို့မြန်မာ။
၅၇. နိဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်း ချဲအတိတ်ကောက်တာ ဒို့မြန်မာ။
၅၈. ချဲပေါက်ဖို့အကြောင်း ဆုတွေတောင်း ဘုရားနားငြီးတာ ဒို့မြန်မာ။
၅၉. နတ်ပန်းမညိှုး ဘုရားပန်းညိှုး စဉ်းစားစရာ ဒို့မြန်မာ။
၆၀. ကြွားဝါဘို့အရေးအလှူပေး ယဉ်ကျေးလိမ္မာ ဒို့မြန်မာ။
၆၁. ဗေဒင်စကား ထင်ယောင်မှား ယတြာချေတာ ဒို့မြန်မာ။
၆၂. များများလှူမှ နိဗ္ဗာန်ရ ထင်ကြ ဒို့မြန်မာ။
၆၃. လော်နဲ့အော်မှစိတ်တိုင်းကျ ဓလေ့ဖြစ်လာ ဒို့မြန်မာ။
၆၄. လှူယောင်ဟန်ထွင် သရုပ်သွင် ပေါ်တင်လုပ်တာ ဒို့မြန်မာ။
၆၅. ကူညီသယောင် အယောင်ဆောင် မျက်နှာပြောင်တာဒို့မြန်မာ
၆၆. ဟိုဒီစပ်စပ် အကုန်တတ် ဆရာများတာ ဒို့မြန်မာ။
၆၇. မသိလည်း လက်ခံ ၊ နားမလည် လည်း ပြန်မမေးနဲ့ ခေါင်းညိမ့်လက်ခံ လမ်းကြောင်းမှန် မှတ်သားတို့ဗမာ
၆၈. ရုံးကိစ္စများ အခါခါ သွား ၊ ပွဲစား ရှိထား အဆင်ပြေသွား
၆၉. စစ်ကားရိုက်ငြား သရုပ်ဆောင်များ အကယ်ဒမီရတာ ဒို့ဗမာ။
၇၀. မီးမလာဘဲ အမှောင်ထဲ ဖဲရိုက်တတ်တာ ဒို့ဗမာ။
၇၁. ယဉ်ကျေးမှုလည်း မြင့်ခဲ့တာ အဲဒါဒို့မြန်မာ
၇၂. ၂၄ နာရီမီးပျက်နေတာ အဲ့ဒါတို့မြန်မာ...
၇၃. ပိုက်ဆံတောင်းတာ အကျင့်ပါ အဲ့ဒါမြန်မာ့ ၀န်ထမ်းပါ။
၇၄. ရုံဝန်ထမ်းတွေ လက်ဖက်ရည်သောက်တာ တို့ဗမာ. (အကို လက်ဖက်ရည်ဖိုးလေး မစပါဦး..)
၇၅. အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့လည်း စိတ်ဝမ်းကွဲ ကြာကြာမမြဲတာ တို့ဗမာ
၇၆. သင်္ကြန်တွင်းဆို အသေပျော်တာ ဒို့ဗမာ
၇၇. ၀က်ဆိုက် အများစု ဘမ်းခံရတာ ဒို့ဗမာ
၇၈. ကော်ပီ ( သီချင်း ) ဆိုတာ ဒို့ဗမာ
၇၉. ၃ရက်နဲ့ ဗီဒီယို တစ်ကားပြီးအောင်ရိုက်နိုင်တာ ဒို့ဗမာ
၈၀. ဘစ်ကားပေါ် အထောက်တော်.. ပေါများနေတာ တို့မြန်မာ..
၈၁. လမ်းဘေးတိုင်းမှာ ဆိုင်ကွမ်းယာ တွေ့မြင်နိုင်တာ တို့မြန်မာ..
၈၂. တောင်းစားသူများ လွန်ပေါများ နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နိုင်တာ ..
၈၃. လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ဆို ကြည့်ကြည့်ပါ အချိန်မရွေး စည်နေတာ ဒို့ဗမာ
၈၄. Connection speed မကောင်းတာဟာ..အဲတာ တို့မြန်မာ..
၈၅. ချစ် ကြိုက် ကွဲ ညား ဇာတ်လမ်းတဲွများ မရိုးနိုင်ပဲ အားပေးနေတာ ဒို့ဗမာ
၈၆. ကူးခွေထွက်တော့မတရား ၊ကွန်ပြူတာဆော့ဖ်ဝဲ အလကားသုံးတော့ တရားတာ ဒို့ဗမာ
၈၇. တရေးနိုးမှ အိပ်မက်ရ မှတ်ဟဥပဒေ။
၈၈. မင်းကောင်း ကြာကြာမခံတာအဲဒါတို့ဗမာ
၈၉. တို့မြန်မာ..ပြည်သူအများ.... လွပ်လပ်ခွင့်နဲ့ဝေးလို့သွား... အရေးအသားပိတ်လို.ထား...
၉၀. ရှေ့ပြော နောက်လွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ
၉၁. ခန့်အပ်စာရ ရယက ပါ၀ါပြတာ တို့မြန်မာ။
၉၂. နှစ်အကြာဆုံး ဆောင်ရွက်မယ် စံချိန်တင်အောင်ကွယ် (သိပါတယ်နော်)
၉၃. သူ့အလှည့် သူ့ဂါထာ ငါ့အလှည့် ငါ့ဂါထာ ပေါ်လစီပြောင်းတာ တို့ဗမာ။
၉၄. ဗီတို (လနအသ) နှစ်လုံး အပြိုင်သုံး အပြုံးမပျက် တိုင်းပြည်တွက်
၉၅. ၀ါးလုံးခေါင်းထဲ လ သာမြဲ . . . ဒါ ဒို့ ဗမာပဲ
Posted by Sai Sai at 12:50 PM0comments
Ancient Stonehenge situated in Sanfranciso the USA, starts 3000 BC
Angkor Wat Temple is situated in Angkor Ancient City, Cambodia starts Early 12 th
Eiffel Tower is located in Paris, France starts 1889 AD
Golden Gate Bridge is located in Sanfranciso the USA starts 1939 AD
Great Wall is located in Bejing China, starts3BC
Imperial Amphitheater is located in Rome, Italy starts 82 AD
Partheon Temple is located in Athens, Greece starts 447-432 BC
Pyramid is located in Gize, Egypt starts 2600 BC
Tajmahal is located in India starts 1630-1650 AD
Versailles is located in Palace, France starts 1623 AD
Posted by Sai Sai at 9:43 PM0comments
Posted by Sai Sai at 9:49 PM0comments
ဘန်ကောက်၊ချင်းမိုင် ကကျနော့် သူငယ်ချင်းတွေအပြောအရ ကျနော် တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်။ ကျနော့်တို့ဘလောက် ကို ကြည့်မရဘူးတဲ့ဗျ။ ဘလောက်တွေအားလုံးကို ဘန်းထားတဲ့ ပုံပါဘဲ ကျနော်တို့လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ Cbox ကိုလည်းဘန်းထားလိုက်တာလွန်ရော ထိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ISP တွေအားလုံး ကဘန်းထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဘလောက်ကို တော့..TOT ဆိုတဲ့ ISP ကိုသုံးတဲ့ သူတိုင်း Access လုပ်လို့ကိုမရဘူးတဲ့ဗျ။ ဒါကတော့ သူများတွေရဲ့ Privacy ကိုချိုးဖောက် တာဘဲ။ သူများတွေရဲ့ privacy ကိုချိုးဖောက်တာလောက် အောက်တန်းကျတာမရှိပါ.. ကျနော်တော်တော်ရွံမုန်းတယ်..စိတ်လည်း လေတယ်..တကယ်.. တကယ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်တုံးကလည်း www.youtube.com ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်ကြီးကိုလည်း ဘန်းလိုက် တယ်လေ။...
ကျနော့်သူငယ်ချင်းများ...ကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ ကျနော် မတတ်ခေါက်နဲ့စိတ်ထဲထင်တာ တွေ လျှောက်ရေးထားတဲ့ ကျနော့်ဘလောက်ကို ဖတ်တဲ့သူတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါ တယ်။ ကျနော့်အရေးအသားများလွန်သည်ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ရင်လည်းခွင့်လွတ်ပါ။
ကျနော့် ဘလောက်က Cbox ကို မမြင်ရရင်...ဒီမှာ.. Click ပြီးတော့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Sai Sai at 3:14 PM0comments
Posted by Sai Sai at 1:25 PM0comments
Posted by Sai Sai at 11:39 AM0comments
Posted by Sai Sai at 7:28 PM0comments
အိမ်မက်ကိုအနမ်းတွေလာလာပေးပြီး စိုင်းစိုင်းရဲ့ပွင့်ဖူးခါစနှလုံးသားကိုအဆိပ်ခတ်ခဲ့တဲ့... သူလေးတယောက် ....................
ဖြေဆေးမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ကုသဖို့ ဘာကြောင့် စိုင်းစိုင်း တယောက်မကြိုး စားခဲ့.............?
အိမ်မက်ထဲကို လာလာလည်ပြီး အနမ်းတွေပေးတဲ့ သူလေးတယောက်ကြောင့်လား?
နိုးထနေတဲ့ အချိန်မှာတောင် ဝေ၀ါးနေတဲ့ စိုင်းစိုင်းဘဝဟာ
ဒါတွေ...ဒီဒုက္ခကြောင့် စို်င်းစိုင်းတယောက် ညညအိမ်ရမှာကို ကြောက်လွန်းလို့ညညဆိုရင် ပိုးစုန်းကြူးနဲ့ တူတူပုန်းတမ်းကစားဖို့ လမင်းကြီးကို တိုင်ပင်ကြည့်တော့..လမင်းကြီးရဲ့ အဖော်တော်ဖြစ်တဲ့ ကြယ်တာရာလေးတွေက သဘောမတူကြပါဘူး။
စိုင်းစိုင်းကို အိမ်မက်နတ်သမီးနဲ့ ဆုံစေချင်လိုတဲ့...သူတယောက်.......ဒီလိုနဲ့ဘဲ မွန်းကြပ်နေတဲ့ အိမ်မက်တွေထဲမှာ ပျော်မွေ့နေမိတဲ့စိုင်းစိုင်းတယောက်
တကယ်လို့များ.......စိုင်းစိုင်းဟာ နေ့ဖက်မှာအိမ်မက်တွေမက်နေတဲ့သူဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်.......... ရူးသွပ်နေလေပြီ...လား?
Posted by Sai Sai at 11:44 PM0comments